अन्तरजातिय बिहे: श्रीमानको २ हात र १ खुट्टा काटियो ! परिवारमा रुवाबासी…(हेर्नुहोस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > अन्तरजातिय बिहे: श्रीमानको २ हात र १ खुट्टा काटियो ! परिवारमा रुवाबासी…(हेर्नुहोस् भिडियो)
अन्तरजातिय बिहे: श्रीमानको २ हात र १ खुट्टा काटियो ! परिवारमा रुवाबासी…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं- कलिलो अनुहारका कृष्ण मलाई देखेर मुस्कुराए ! उनले कसरी गुमाए त दुई हात र एक खुट्टा ? कृष्णकी श्रीमती अन्तर्वार्तामै रुदा मैले पनि आफुलाई सम्हाल्नै सकिन, आंशु आंखाको डिलसम्म आयो । कस्तो पिडा, पहिला बाबाले छोडे पछि आमाले । सानैदेखि मामाघरको हजुरआमाले हुर्काए, कृष्णलाई ।
जब ठुलो भए यस्तो घटना घट्यो । प्रेम गरेपछि अन्तरजातिय बिवाह गरेका रुपा र कृष्णको प्रेम कथा पनि मेरै फिल्मको सुटिंगबाट सुरु भएको रहेछ । हामी तपाईको बिर्खेलाई चिन्छस् फिल्मको सुटिंग हेर्न जांदा पहिलो पटक कुराकानी गरेको नि, रुपाले सुनाईन् । कृष्णको हात र खुट्टै काट्नु पर्ने घटना के थियो ? किन सानैमा छोडेका थिए, कृष्णलाई उनका बाबु आमाले ? कसरी सम्भव भयो, कृष्ण र रुपाको अन्तरजातिय बिवाह ? अनि समाजले किन भन्दैछ रुपालाई, कृष्णलाई छोड्दे ? सबै कुरा थाहा पाउन भिडियो हेर्नुहोस् …
सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका जनप्रतिनिधिको घर भत्काउन पोखरामा महानगरपालिकाको डोजर पुगेपछि भयो यस्तो तमासा
अर्थमन्त्रीलाई गगनका कटाक्षः २ महिना लकडाउनमा राखेर ५ दिनमै कर, बिद्वान मन्त्रीले भनेपछि मान्नैपर्याे!